Ukuhlobisa ikhaya lakho ngesitayela sibonga emakamelweni okugqoka | Hlobisa
USusana godoy | 25/10/2021 10:23 | Umhlobiso
Ukuhlobisa ikhaya lakho ngesitayela kungaba into elula kakhulu kunalokho obukucabanga, ngoba phakathi kwayo yonke imininingwane noma ifenisha esingacabanga ngayo izindlu zokugqoka. Ubani ongakaze aphuphe ngalawo makhona agcwele izingubo nezesekeli esizibone izikhathi ezingamakhulu esikrinini esikhulu?
Hhayi-ke manje ungaba nayo futhi ekhaya lakho, kepha okokuqala kufanele uthole phakathi kwabo bonke labo izinhlobo ozozithola ngokusekelwe kumiklamo yazo. Kuzoba ngumsebenzi wobuciko ku umhlobiso ukuthi ungakwazi ukusingatha ekhaya lakho, ngokuba umona wabaningi. Ngabe ufuna ukuthola ukuthi yikuphi okuzohamba kahle kakhulu kuwe nesitayela sakho?
1 Ukuhlobisa ikhaya lakho ngesitayela: Khetha igumbi lokugqoka elivulekile
2 Igumbi lokugqoka elimise okuka-'U'
3 Amakhabethe esimanje afaka umumo 'L'
4 Igumbi lokugqoka nesiqhingi?
5 Igumbi lokugqoka kanye netafula lokugqoka: Enye yezinto ezinhle kakhulu ezingafinyeleleki ukuhlobisa ikhaya lakho ngesitayela
Ukuhlobisa ikhaya lakho ngesitayela: Khetha igumbi lokugqoka elivulekile
Ngaphandle kokungabaza, singesinye sezixazululo ezinhle kakhulu zekhaya lakho. Okokuqala ngoba Ingashintshwa ukuze ivumelane nezikhala ezinkulu kanye nezinye ezincane futhi okwesibili, idinga ukuhleleka kahle ngaso sonke isikhathi. ukuze isinike leso sitayela esikhuluma ngaso kakhulu. Kuyiqiniso ukuthi ingenye yemibono eshayelwa ihlombe kakhulu, ngesici sezomnotho futhi ngoba ungahlala uyihlanganisa namabhokisi wesitoreji uma ufisa. Amakamelo okugqoka avulekile anikeza isikhala esiningi, ikakhulukazi uma sikhuluma ngamakamelo amancane.
Igumbi lokugqoka elimise okuka-'U'
Ngenye yemibono emihle nokuthi sesivele siyibona ngeso lengqondo. Ngoba imayelana nokumnika ingxenye enkulu yekamelo. Umumo 'U' uzibophezele ekuthatheni izindonga ezintathu kwezine, kodwa ngaphandle kokungabaza, ukuhlobisa ikhaya lakho ngesitayela kanye negumbi lokugqoka elifana naleli nakho kuyakufanelekela. Uzoba nesikhala esithe xaxa futhi ngeke usadinga amanye amakhabethe noma izindawo ezinamasu ukugcina zonke izingubo zakho. Amakhabethe okuhamba anomumo othi 'U' anawo womabili amadrowa namashalofu nezinye izindawo ezinkulu zama-hangers, ngakho-ke baphelele kakhulu.
Amakhabethe esimanje afaka umumo 'L'
Mhlawumbe ngoba zimboza isikhala esincane kepha impela zingenye yaleyo mibono okufanele siyicabangele. Uma ukhetha kubo, ungabheja futhi ngemibala emhlophe bese ubeka isibuko. Konke lokhu kuzosho ukuthi egumbini lapho ubeka khona, ungathola ku-amplitude. Kungumbono ongaphelelwa isikhathi ngakho-ke kuzohlala kusemfashinini futhi ngenzuzo ukuthi kuzokusiza ukuthi ukwazi ukugcina konke okudingayo. Imvamisa zinamadilowa amaningi engxenyeni engezansi nama-attics amabhokisi okugcina.
Igumbi lokugqoka nesiqhingi?
Khona-ke kuyoba kakade iphupho elihle lokuhlobisa indlu yakho ngesitayela kanye nesikhala esikhulu. Ngoba isiqhingi esisekhishini siyisitoreji esengeziwe futhi kulolu hlobo lwegumbi sasingeke sishiywe ngemuva. Isiqhingi okukhulunywa ngaso sizoba namadilowa angapheli, okusiholela ekutheni sikhulume ngeqiniso lokuthi izingubo ezincane kakhulu noma izesekeli empeleni zinendawo lapho. Vele, uma ufuna ukugcina izicathulo zakho kangcono futhi ushiye izesekeli kwenye indawo, khona-ke futhi kuzoba neziqhingi ezivulekile ezinezikhala eziningana zezicathulo zakho. Isiqhingi esivulekile noma esivaliwe, ungakhetha siphi?
Igumbi lokugqoka kanye netafula lokugqoka: Enye yezinto ezinhle kakhulu ezingafinyeleleki ukuhlobisa ikhaya lakho ngesitayela
Uma sikhuluma ngokuhlobisa indlu yakho ngesitayela, omunye wemibono emihle yaleyo esiyibona kumamuvi noma uchungechunge esiluthanda kakhulu ngeke uphuthelwe. Ngoba zicabange unekamelo Kuhloselwe kuphela amakamelo okugqoka kepha kubantu abadala abanendawo yokugqoka. Kuyo ungakwazi ukugqoka nokuthinta kabusha, ukame izinwele zakho nakho konke ongakucabanga. Kuyiqiniso ukuthi yize kungenakufinyeleleka ngokobukhulu obuthile, mhlawumbe kungaguqulwa ngamathuba akho. Awukukholwa na? Kufanele nje ukhethe ifenisha enhle egijima kulo lonke udonga, ushiye isikhala esincane setafula lokugqoka kanye nesihlalo se-armchair, kuyilapho isibuko singangena kunoma yimuphi umnyango wekamelo lokugqoka ngokwalo futhi sinikeze isikhala esiningi nokukhanya. Ucabangani? Ingabe kuzoba umsebenzi wakho omusha ekhaya?
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Umhlobiso » Izinhlobo zamakamelo okugqoka ukuhlobisa ikhaya lakho ngesitayela